सूर्यको प्रतिरूप : ९० वर्षदेखिको विश्वको प्रयास सफलता नजिक पुग्दै — Sanchar Kendra
१एघार महिनामा एक करोड ३० लाखभन्दा बढीको सियो भित्रियो
२संसद बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित
३एमाले र माओवादी सांसद आन्तरिक छलफलमा
४बाजुराको बुढीगंगामा भोलि मतदान हुँदै, एक हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाइए
५विनोद शाही हत्या प्रकरण- प्रमाण नपुगेको भन्दै पक्राउ परेकी मेयर अम्बिकालाई छाड्ने तयारी
६संसद बैठक रोकेर सभामुखसँग परामर्श
७अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो
८कञ्चनपुरमा विद्यालयको छतमा सुतेका धामी मृत फेला
९दाइजोको निहुँमा पत्नी हत्या गरेर फरार युवक ४ वर्षपछि पक्राउ
१०अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदामा
११अर्थमन्त्रीबारे संसदीय छानविन समिति बनाउन माओवादी तयार !
१२बजेटमा उठेका विषयबारे एमालेसँग छलफल गर्ने माओवादीको निर्णय
१यसरी परे विप्लव संसदीय संशोधनवादी एम्बुसमा
२बर्नस्टिनका नयाँ प्रतिनिधि विप्लव !
३सञ्चारकेन्द्र समाचार प्रभाव- वडाध्यक्ष रावललाई निलम्बन गर्न अख्तियारको पत्र
४विनोद शाही हत्या प्रकरण- मेयर अम्बिका चलाउनेले गरिन प्रहरीसामु आत्मसमर्पण, ६ जना अझै फरार
५विनाेद हत्या प्रकरण- मेयर अम्बिका चलाउनेविरूद्द किटानी जाहेरी दर्ता, स्थानीयले खोले यस्तो रहस्य
६स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला वली पक्राउ
७काठमाडौँमा मध्यराति भूकम्पको धक्का
८नबिल बैंकले आफ्ना शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिने
९नबिल बैंकमा पर्यावरणमैत्री व्यवसाय ऋण कर्जा, यस्ता छन् आकर्षक सुविधा
१०ललितपुरमा ट्राफिक प्रहरीको ज्यादती, बाटोमा हिँडिरहेका डाक्टरमाथि गर्यो कुटपिट
११अखिल क्रान्तिकारीकाे भेलाद्वारा संघर्षमा जाने निर्णय, को-को छन पहिलो निसानामा ?
१२अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च, यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर
सूर्यको प्रतिरूप : ९० वर्षदेखिको विश्वको प्रयास सफलता नजिक पुग्दै
काठमाडौँ। दक्षिणी फ्रान्सको प्रोभेन्स क्षेत्रस्थित एउटा सानो पहाडबाट दुईवटा सूर्य देखिन्छ । एउटा साढे चार खर्ब वर्ष पुरानो सूर्य, जुन हामी सो ठाउँ पुग्दा अस्ताउँदै थियो । अर्को हजारौँ मानव मस्तिष्क र हातले बनाउँदै गरेको एकदम सुस्तरी उदाइरहेको कृत्रिम सूर्य । विशाल निर्माण क्षेत्रमा बनिरहेको सूर्यले काम गर्न थालेपछि मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक सङ्कट जलवायु सङ्कटलाई समाधान हुन सक्छ ।
फ्रान्सको सानो कम्युन सेन्ट–पल–ले–डुरेन्समा ३५ देशहरू मिलेर ‘न्युक्लियर फ्यूजन’ लाई यथार्थमा बदल्ने प्रयास गर्दैछन् । सूर्य र सम्पूर्ण तारामा प्राकृतिक रूपमा चल्ने प्रक्रिया ‘न्युक्लियर फ्युजन’लाई पृथ्वीमा नक्कल गर्ने प्रयास हालसम्म निक्कै कठिन साबित भएको छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार न्युक्लियर फ्यूजनले अथाहा ऊर्जा उत्पादन गर्छ र खनिज इन्धनले झैँ यसले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन अलिकति पनि गर्दैन । हाल यसमा विभिन्न देशले बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गरिरहेको ‘न्युक्लियर फिसन(आणविक विखण्डन)’प्रक्रियाले जस्तो हजारौँ वर्षसम्म नष्ट नहुने रेडियोधर्मी अवशेष पनि बाँकी रहँदैन ।
यदि सफल भयो भने फ्युजन ऊर्जाले विश्वको अधिकांश ऊर्जाको आवश्यकता पुरा गर्छ । फ्युजन पावरप्लान्टले जम्मा १ ग्राम इन्धनबाट ८ टन तेल बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ । तर फ्युजन ऊर्जा कहिले यथार्थमा बदलिएला ? वैज्ञानिकहरूमाझ एउटा ठट्टा प्रख्यात छः फ्युजन ऊर्जा कहिले सम्भव होला भनेर जहिले प्रश्न गरे पनि उत्तर सधैँ ‘३० वर्ष पछि’ हुन्छ ।
तर इतिहासमा पहिलो पटक, यो यथार्थ बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
फेब्रुअरीमा बेलायतको अक्सफोर्ड नजिकैको कुल्हाम गाउँमा वैज्ञानिकहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारेको घोषणा गरे । उनीहरुले हालसम्मकै उच्च ५९ मेगाजुल फ्युजन ऊर्जा ५ सेकेन्डसम्म उत्पादन गर्न सफल भए, जुन ऊर्जा एक घरलाई दिनभरको आवश्यकता पुरा गर्न पर्याप्त हुन्छ ।
न्युक्लियर फ्युजन टोकम्याक भनिने डुनोट आकारको यन्त्रमा गरिन्छ, र बेलायतको टोकम्याकले उत्पादन गरेको ऊर्जाभन्दा बढी ऊर्जा खपत गरेको थियो । तथापि यसले पृथ्वीमा पनि न्युक्लियर फ्यूजन सम्भव रहेको प्रमाणित गरेको छ यसलाई ऐतिहासिक क्षण मानिएको छ ।
बेलायतको सफलता फ्रेन्च परियोजनाको लागि उत्कृष्ट समाचार बनेर आयो र जुन बाहिरिए यता परियोजनामा रफ्तार बढेको महसुस हुन्छ । इन्टरनेशनल थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेन्टल रियाक्टर(इटर) नामको परियोजनाको मुख्य लक्ष न्युक्लियर फ्यूजनलाई भविष्यमा व्यावसायिक प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नु हो । यदि यो सफल भयो भने विश्वका तमाम खनिज इन्धन प्रयोगहीन हुनेछ ।
इटरलाई सात वर्षसम्म नेतृत्व गरेका महानिर्देशक बर्नार्ड बिगोको गत मे १४ मा निधन भएपछि परियोजनामा केही परिवर्तन भइरहेको छ ।
एक–अर्कालाई विकर्षित गर्ने हुने दुई अणुलाई एकआपसमा जोडेर फ्यूजन ऊर्जा सिर्जना गरिन्छ । डुनोट आकारको टोकम्याक थोरै मात्रामा इन्धन हालेपछि ठूला चुम्बकहरुलाई सक्रिय बनाइन्छ । तिनले पदार्थको चौथो अवस्था ‘प्लाज्मा’ बनाउँछ, जुन ग्यास अथवा सुप वित्तीय रूपमा चार्ज भएजस्तै हुन्छ ।
टोकम्याकभित्रको तापक्रमलाई अत्यधिक उच्च स्तरमा बढाएपछि इन्धनका आणुहरु जोडिने शक्ति निर्माण हुन्छ । यस प्रक्रियामा हिलियम र न्युट्रन बन्छन् । यी सहउत्पादनको पिण्ड तिनको अंशको योगभन्दा कम हुन्छ । हराएको पिण्ड विशाल ऊर्जामा बदलिन्छ ।
प्लाज्माबाट बाहिरिन सफल न्युट्रनहरु टोकम्याक भित्रको भित्तामा भएको ‘ब्लाङ्केट’मा ठोक्किन्छन् र ताप सिर्जना गर्छन् । त्यो तापले पानी तताउँछ र त्यसबाट सिर्जना हुने वाफले टर्बाइन घुमाएर बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।
यो प्रक्रियाका लागि टोकम्याकमा अत्यधिक बढी ताप चाहिन्छ । प्लाज्माको तापक्रम १५ करोड डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नुपर्छ, जुन सूर्यको केन्द्रभन्दा १० गुणा बढी हो । यहाँ प्रश्न उठ्छ ः पृथ्वीमा यति उच्च तापक्रम केले थामिरहन सक्छ ? यो फ्युजन ऊर्जा सिर्जनामा लागिरहेका अनुसन्धानदाताले सुरुदेखि सामना गरेका विभिन्न चुनौतीमध्ये एक हो ।
वैज्ञानिक तथा इन्जिनियरहरूले विशाल चुम्बक बनाएर त्यसको चुम्बकीय फिल्म सिर्जना गर्ने , त्यसभित्र तापलाई थेग्ने उपाय पत्ता लगाएका छन् । त्यसबाहेक हरेक कुरा यति उच्च तापमा पग्लिन्छ ।
फ्यूजन ऊर्जाको उत्पादन प्रक्रियाको सबैभन्दा कठिन हिस्सा होइन । हाइड्रोजन बमको निर्माण भएदेखि नै पृथ्वीमा न्युक्लियर फ्यूजन रियाक्सन हुन थालेको छ । न्युक्लियर फ्युजनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसलाई कसरी लामो समय टिकाउने भन्ने हो ।
बेलायतस्थित जोइन्ट युरोपियन टोरस(जेट) टोकम्याकले पाँच सेकेण्डसम्म फ्युजन ऊर्जालाई टिकाएर हालसम्मको रेकर्ड बनाएको छ । यसमा प्रयोग भएको चुम्बक सन् १९७० ताका बनेको र तामाले बनाइएको छ । पाँच सेकेन्डभन्दा बढी समय ताप कायम रहेको भए त्यो पनि पग्लिने थियो ।
इटरमा प्रयोग गरिएका नयाँ चुम्बक भने धेरै समय टिक्ने गरी बनाइएको छ । परियोजनाले संयन्त्रमा प्रयोग गरिने ऊर्जाभन्दा १० गुणा बढी ऊर्जा उत्सर्जन गर्ने लक्ष लिएको छ । अर्थात ५० मेगावाट ऊर्जा प्रयोग गर्दा संयन्त्रले ५०० मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ ।
इटरले अहिले मुख्यत व्यावसायिक प्रयोजनको लागि भन्दा पनि जेटले भन्दा बढी समय फ्युजन ऊर्जा टिकाउन सकिन्छ भन्ने देखाउने लक्षमा काम गरिरहेको छ । यस परियोजना सफल भएमा भविष्यमा व्यावसायिक स्तरमा फ्युजनको बाटो खुल्नेछ ।
सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजन प्रक्रियामा हाइड्रोजन अणु जोडिएर हिलियममा निर्माण हुन्छ । बेलायतको जेटले हाइड्रोजनकै दुई आइसोटोपः डिउटेरियम र ट्राइटियमको प्रयोग गर्‍यो । आइसोटोपको रसायनिक संरचना र प्रतिक्रियाको आईड्रोजनकै जस्तो हुन्छ । इटरले पनि यिनलाई नै प्रयोग गर्नेछ ।
डिउटेरियम र ट्राइटियम दुवै प्रकृतिमा पाइन्छ । सफा तथा समुन्द्रको नुनिलो पानीमा डिउटेरियम जति पनि पाइन्छ । ५०० मिलिलिटर पानीमा पाइने डिउटेरियम अलिकति ट्राइटियमसँग मिलेर एउटा घरलाई एक वर्ष पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।
डिउटेरियम सहजै पाइए तापनि ट्राइटियम दुर्लभ छ तथापि यसलाई कृत्रिम ढङ्गबाट उत्पादन गर्न नसकिने हैन । हाल विश्वभरमा जम्मा २० किलोग्राम मात्र ट्राइटियम उपलब्ध छ र यो अति महँगो छ । एक ग्राम ट्राइटियमलाई लगभग ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्छ ।
टाढाबाट हेर्दा इटर सञ्चालनको लागि तयार भएजस्तो देखिन्छ, तर नजिक पुग्दा अझै काम बाँकी देखिन्छन् । ३९ वटा निर्माण ब्लक बनाएर जटिल काम अघि बढिरहेको छ ।
सीएनएनकर्मी मुख्य कार्यक्षेत्रमा पुग्दा कामदारहरू ७५० टनको क्रेनका सहायताले उपकरण जोडिने काम चलिरहेको थियो । कामदारले टोकमाकको बाहिरी भाग बनाइएसके पनि त्यसमा लाग्ने विशाल चुम्बक आइपुगेको छैन ।
टोकम्याक असाधारण ठूलो हुनेछ । यसको तौल लगभग २३ हजार टन हुनेछ– जुन ३ वटा आइफेल टावरको तौल बराबर हो । यसमा झण्डै १० लाख पार्टपुर्जा हुनेछन् ।
इटरका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विशाल चुम्बकहरू प्रयोग हुनेछ । विशाल आकारको कारण यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान नसकिने भएकाले यिनलाई निर्माण स्थलमा लगेर जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
युक्रेन युद्धपछि इटरमा रुसको भूमिकामाथि आशंका
इटर परियोजनामा विश्वभरका ४५०० कम्पनी र १५ हजार कामदार संलग्न छन् । परियोजनामा ३५ विभिन्न राष्ट्र संलग्न छन् भने युरोपेली संघ, चीन, अमेरिका,रुस, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया गरी सात मुलुकले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि इटरमा उसको संलग्नता वा बहिर्गनलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न भएको थियो । युद्धपछि रुसलाई अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक परियोजनाबाट हटाइए पनि इटर परियोजनामा युरोपेली आयोगले रुसलाई छुट दिने बतायो । रुस यो परियोजनामा मात्र नभई ऐतिहासिक रूपमा न्युक्लियर फ्यूजनबारे धेरै पहिले महत्त्वपूर्ण खोज गर्ने मुलुक हो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकले सन् १९३० को दशकदेखि नै फ्युजन ऊर्जाको खोज सुरु गरेका थिए । तर सोभियत संघले टोकम्याक निर्माण गरेपछि यस क्षेत्रले गति लिन थाल्यो । सन् १९६८ मा सोभियत अनुसन्धानकर्ताले न्युक्लीयर फ्युजनलाई आवश्यक उच्च तापक्रम हासिल गरे र प्लाज्मालाई केही समयसम्म टिकाउन सके ।
खासमा टोकम्याक शब्द आफैमा रुसी भाषाबाट आएको हो ।
रुसले यस परियोजनाको मुख्य लगानीकर्ता हो । टोकम्याकको माथि प्रयोग हुने चुम्बक रुसी सहर सेन्ट पिटरवर्गमा बनेको हो । यी सबै कुरालाई हेरेर रुसको भूमिकामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
इटरमा भूराजनीतिले सधैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । दशकौँको प्राविधिक अध्ययन, राजनीतिक लेनदेन र कूटनीतिक प्रयासपछि यसको निर्माणस्थल तय गरिएको थियो । सन् २००५ मा मस्कोमा भएको बैठकले फ्रान्सको सेन्ट–पल–ले–डुरान्समा रियाक्टर बनाउने औपचारिक सहमती भएको थियो ।
त्यसको पाँच वर्षपछि निर्माण कार्य उद्घाटन गरियो भने सन् २०१४ मा बल्ल निर्माण सुरु भयो ।
ठूला परियोजनाका लागि समय र पैसा धेरै लाग्ने गर्छ । सुरुमा परियोजनाको सम्पूर्ण निर्माण खर्च ६ अर्ब युरोप हुने प्रक्षेपण थियो जुन अहिले बढेर २० अर्ब युरोप पुगेको छ । परियोजनाको खर्चको ४५ प्रतिशत हिस्सा युरोपेली संघले व्यहोरेको छ भने अन्य संलग्न मुलुकले कम्तीमा पनि ९ प्रतिशत खर्च व्यहोरेका छन् ।
सन् २००१ मा गरिएको प्रक्षेपणले परियोजनाले पहिलो ब्याचको प्लाज्मा सन् २०१६ मा निर्माण गर्ने देखाएको थियो जुन मिति अहिले सरेर २०२५ मा पुर्‍याइएको छ । पहिलो डिउटेरियम–ट्राइटियम परीक्षणलाई २०३५ मा हुने समय तालिका छ । सीएनएन
विज्ञान-प्रविधि सँग सम्बन्धित
संसद बैठक रोकेर सभामुखसँग परामर्श
दाइजोको निहुँमा पत्नी हत्या गरेर फरार युवक ४ वर्षपछि पक्राउ
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदामा
विनोद शाही मृत्यु प्रकर : अछाममा तनाव, १२ प्रहरी सहित् प्रदर्शनकारी घाइते
पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारवाही गर्न महासंघको माग
विनोद शाही हत्या प्रकरण: जिल्ला भर २ दिन सवारी बन्द हुने
विनोद शाही मृत फेला प्रकरण : पञ्चदेवल नगरपालिकाका प्रमुख पक्राउ
केएमसी स्कुलभित्रै कर्मचारीको मृत्युले तनाव, डिजिटल बोर्ड समेत तोडफोड
बहस : क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट एकता
बर्नस्टिनका नयाँ प्रतिनिधि विप्लव !
सद्‌भाव भड्किन्छ, व्यापार खस्किन्छ भनेर दुर्व्यवहार सहने ?
यसरी परे विप्लव संसदीय संशोधनवादी एम्बुसमा